ဝိုင်ပုလင်းနဲ့ဘီယာပုလင်းတွေကို ဖောက်တံမပါပဲ အလွယ်တကူဘယ်လိုဖောက်ကြမလဲ? – Trend.com.mm
၀ိုင်ပုလင်းနဲ့ဘီယာပုလင်းတွေကို ဖောက်တံမပါပဲ အလွယ်တကူဘယ်လိုဖောက်ကြမလဲ?
Posted on December 21, 2017 by Noel
၀ိုင်ပုလင်းတွေတော့ဝယ်ထားပါရဲ့ ။သောက်ခါနီးမှဖောက်တံမရှိဘူးဆို အဆင်မပြေဘူးနော်။ လူတိုင်းနီးပါးဖြစ်တတ်ကြတယ်ဟုတ်!အခု ဖောက်တံမပါပဲဝိုင်ပုလင်းတွေကို အလွယ် တကူဖောက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကုိုပြောပြပေးသွားမှာမို့လို့ သေချာမှတ်ထားကြနော်။
ဖောက်တံမရှိလည်းကတ်ကြေးရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါကတော့ အိမ်မှာဖောက်တံမရှိတဲ့အခါ ကတ်ကြေးကိုသုံးလို့ရအောင်ပေါ့။ကတ်ကြေးအစွန်း ၂ဖက်နဲ့ ပုလင်းအဖုံးကိုကော်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ကြည့်ပါ။
ဇွန်းခပ်ကြီးကြီးတစ်ခုကိုယူပြီး ပုလင်းအဖုံးကိုကော်ထုတ်ရင် အလွယ်တကူ အဖုံးပွင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
အပြင်သွားရင်လက်သည်းညှပ်ဆောင်သွားတတ်တဲ့လူတွေရှိရင် အပြင်မှာသောက်တဲ့အခါ ဖောက်တံမရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်။လက်သည်းညှပ်သုံးပြီးအဖုံးကိုကော်ထုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။
ကတ်ကြေးမရှိရင် ခက်ရင်းကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ ပုလင်းအဖုံးကိုခက်ရင်းနဲ့ထိုးပြီးပွင့်တဲ့အထိလုပ်ပေးနေရုံပါပဲ။
ရော်ဘာလက်ပတ်ကြိုးတစ်ခုရှိရင်လည်းပုလင်းအဖုံးဖွင့်လို့ရပါတယ်။ရော်ဘာလက်ပတ်ကြိုးကို ပုလင်းအဖုံးနားမှာ ၂ပတ်လောက်ပတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်လှည့်ပြီးဖွင့်ပါ။လက်လည်းမနာတော့ပဲ ခဏကြာရင်ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်။
စက္ကူနဲ့ပုလင်းအဖုံးဖွင့်မယ်ဆိုလို့အံ့သြသွားမယ်ထင်ပါတယ်။စက္ကူကိုထူထူလေးဖြစ်အောင်ခေါက်ပါ။ပြီးရင်စက္ကူခေါက်ထားတဲ့စောင်းနဲ့ပုလင်းအဖုံးကိုတေ့ပြီး အောက်ကနေပင့်ရိုက်ပြီးဖွင့်ပါ။ အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တာကြောင့်စမ်းလုပ်ကြည့်ရင်မမှားဘူးနော်။
သော့တစ်ချောင်းနဲ့ပုလင်းအဖုံးကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတော့ သော့ကို ပုလင်းအဖုံး အတွန့်အောက်မှာေ တ့ထားပါ။ပြီးရင်အတွန့်တစ်ခုချင်းစီကိုပြေသွားအောင်ကော်ထုတ်ပါ။ အားလုံးပြေသွားရင် ပုလင်းအဖုံးပွင့်ပြီပေါ့။
အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် Midnight Sunရုပ်ရှင်
ခရစ်စမတ်မှာ ချစ်တဲ့သူတွေကို ဘာလက်ဆောင်ပေးရမလဲစဉ်းစားရခက်နေမယ်ဆိုရင်…